Soo Iibso Dhar Dheer Sare Oo Leather Dumarka Loo Yaqaan - Maraakiibta Bilaashka Ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Maqaarka sare ee maqaarka Pu
Maqaarka sare ee maqaarka Pu gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nambarka Tusaalaha: 9653
Qaabka Wadada: Moto & Baaskiil
Qaabka Saraawiisha: Toosan
Fiiro gaar ah: 1 inji = 2.54 cm. Fadlan raac jaantuska cabbirka si aad u doorato cabbirka. Ha dooranin caadooyinkaaga. Cabirku wuxuu yeelan karaa 2-3 cm kala duwanaansho sababtoo ah cabirka gacanta. Sidaan wada ognahay, kumbuyuutarrada kaladuwan waxay si kala duwan u muujiyaan midabada, midabka sheyga dhabta ah ayaa waxyar ka duwanaan kara sawirada soo socda.
Aad ayey u qurux badan tahay sugitaankeeda maxaa yeelay gaarsiinta ayaa aad u dheereyd
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 86644.
dib u eegista 86644